Wikipedia:Caawinaad - Gpedia, Your Encyclopedia
(Waxaa laga soo toosiyay Gpedia:Caawinaad)
Gpedia waa qamus furan (fasaxan) kaasi oo ay isticmaalayaashiisa si wada jir ah u wada qorayaan. Bogan waxaad ka heli doontaa macluumaad la'xiriira wikipedia:ha, sidii aad usiticmaali lahayd iyo sida uu ushaqeeyo.
Tafaasiil guud oo ku saabsan Gpedia
Waxaad ka heleysaa waxa ku jiro wikipedia:ha iyo filosoofiyada ka dembeysa. Waxaa kaloo dheeraad ku ah sida aad wax uga bedeli lahayd maqaalada qoran iyo warbixin ku saabsan bulshada wikipedia
Jawaabo ku saabsan su'aalahaan. Sidee loo dhaqmaa marka la'joogo wikipediaha? Maqaalo noocee ah ayaa lagu qorikaraa wikipediaha?
Gpedia waa qaamuus furan (fasaxan) kaasi oo ay isticmaalayaashiisa si wada jir ah u wada qorayaan. Bogan waxaad ka heli doontaa macluumaad la'xiriira wikipedia:ha, sidii aad u siticmaali lahayd iyo sida uu u shaqeeyo.
Jawaabo ku saabsan su'aalahan. Sidee loo dhaqmaa marka la'joogo wikipediaha? Maqaalo noocee ah ayaa lagu qorikaraa wikipediaha?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Cutub:Caawin&oldid=164799"